Saraakiil safaarad ku xirnaa muddo 30 sano | Wardoon
Home Somali News Saraakiil safaarad ku xirnaa muddo 30 sano
Saraakiil safaarad ku xirnaa muddo 30 sano
Laba sargaal oo ka mid ah saraakiishii ugu sarreysay dowlladdii Mangistuu Haylemaaryaam oo ku dhawaad 30 sano safaaradda Talyaaniga magangalyo ugu jiray ayaa la sheegay maalmaha soo socdo in cafis loo fidinayo.
Saraakiishan oo kala ah Koorneel Biraahuu Baayih iyo General Addis Tadlaa ayaa Safaaradda Talyaaniga magangalyo ugu jiray tani iyo marki xilka laga tuuray dowladdii Dargiga uu Mangistuu hoggaaminayey.
Saraakiishan ayaa safaradda Talyaaniga galay maalin un ka hor inta ay xoogaggii EPRDF ay caasimadda Itoobiya ee Addiis Ababa la waregin.
Koorneel Birhaanuu Baayih ayaa dowladdii Mangiste ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda, halka uu General Addis Tadlaana uu ahaa abbaanduulaha ciidamada.
Xoghayaha arrimaha warbaahinta ee xafiiska Xeerilaaliyaha Guud ee Federaalka Itoobiya Awal Suldaan oo BBC u warramay wuxuu sheegay labadan sargaal iney ku xukunnaayeen xukun dil ah balse madaxweynaha dalka ay marki dambe xukunka ugu beddeshay xabsi daa’im.
Labadan sargaal ayaa xukunkaasi ku muteystay marki lagu soo eedeeyey dambiyadi dalka Itoobiya ka dhacay 17-ka sana uu Mangistu ka soo arriminayey dalkaasi iney qayb ka ahaayeen.
Mr Awal wuxuu intaasi ku daray labada sargaal maadaamaa ay da’doodu weynaatay caafimaad darro bandanna ay la soo deristay in la soo jeediyey in xubnahaasi cafis loo fidiyo.
“Annagu halka ay ay ku sugan yihiin ma naqaanno. Safaaradduna waxay noo sheegtay iney xanuunsanayaan. Waxayna safaaradda noo soo jeedisay in xubnahan la iska cafiyo” ayuu yiri.
Xafiiska xeer ilaalinta oo soo jeedinta safaaradda Talyaaniga ka duulaya wuxuu codsi ah in la cafiyo uu u gudbiyey Madaxweynaha dalka Itoobiya codsiga oo loo sii mariyey Guddiga saamaxaadda iyo cafis fidinta ee heer qaran.
“Shaqsiyaadkan dambiyada la sheegay iney galeen marka la fiiriyo ma aha kuwo cafis mudan balse 30-kii sano ee ay safaaraddu ku jireen maadaamaa dhaqdhaqaaqooda uu yaraa xaalad xabsi u dhigantana ay ku jireen oo ay xorriyad haysan uu codsiga cafiska ku yimid” ayuu yiri.
Safaaradda Talyaanigana waxay sheegtay ayuu yiri Mr Awal iney safaaraddu magangelinta mooyee ay muddadaasi waxba u qaban wax welibana reerkooda ay ka heli jireen.
“Madaxweynaha dalka Itoobiya waxay oggolaatay xukunkii dilka ahaa in xabsi daa’im looga beddelo, xafiiska xeer ilaalintuna marka uu qiimeeyey xaaladda la sheegay iney saraakiishaasi ku jiraan uu ka garaabay in cafis loo fidiyo kiiskoodana Isniinta ayaa maxkamadda la geynayaa” ayuu yiri.
Dowladda Itoobiya waxay marar badan ay Safaaradda Talyaaniga ee Addis Ababa ka dalbatay saraakiisha dowladda Mangiste ka tirsanaa ee ku sugan safaaradda iney ku soo wareejiso si loogu qaado xukunnadi ay maxkamaddu ku ridday balse safaaradda ayaa dalabka dowladda diiday ku dhawaad 30 sanana sraakiishaasi maganganyo ku siisay safaradda dhexdeeda.
Xilliga dowladda Mangiste ay dhacday saraakiisha isku dhiibay safaaradda Tayaaniga waxay ahaayeen Toddoba iyada oo qaarkood ay safaaradda gudaheeda ku geeriyoodeen.
Madaxweynihi Itoobiya 17-ka sana soo hoggaaminayey ee Korneel Mangistuu Hayleaaryaam ayaa muddo 30 sana ah magangalyo ku jooga dalka Zimbaabwe isaga xilka ka dagay marki ay Jabhadda Xoreynta shacabka Eritrea ee EPLF ay qabsadeen magaalada Asmara, 2007-dina waxay maxkamad sare ee Itoobiya ku xukuntay xukun dil ah isaga oo dalka ka maqan.
Previous articleWararkii ugu dambeeyey xadka Soomaaliya iyo Kenya
Next articleDAAWO:-Jabhada Jeneral Xuud oo furatay xarun ciidanka lagu tababaro+SAWIRRO
Trump oo kacararay wariyayaasha mar ay sulaalo waydiinayeen +VIDEO
DAAWO:-“Ilhaan Cumar ayaa ka Ragganimo Badan Dhammaan Madaxda Carabta ”